Archive du 20191216
Rina Randriamasinoro « Tena sahy aho matoa nirotsaka... »
Mbola haveriko ny teniko tamin'ny vao nirotsaka ary nohamafisiko tamin'ny faradoboka hoe izahay aza anaovana zavatra hafahafa fa isika samy nosoran-dreniny menaka, hoy i Rina Randriamasinoro hentitra dia hentitra ny sabotsy teo nanoloana ireo vahoaka tonga teny amin’ny Magro Behoririka.
Thierry Raveloson “Tsy ho avy amin’ny loholona no hiavian’ny krizy !”
Efa fomban-javatra ny fisian’ny fivezivezen’ny lalàna momba ny tetibola na LFI eo amin’ny antenimieram-pirenena sy antenimierandoholona,
Andry Rajoelina “Tsy hahaongana ahy izany ianareo !”
Somary nanaitra ny resaka nataon’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny faran’ny herinandro lasa teo nandritra ny fanolorana ireo kamio hampiasain’ny SAMVA,
Fako nivangongo teto an-drenivohitra Voaporofo fa resaka politika
Fiara vaventy miisa 35, daba fanariana fako 175, fanamiana sy fitaovana isan-karazany no natolotry ny fanjakana foibe ho an'ny SAMVA ny sabotsy lasa teo.
Tanà-masoandro 301 ny fifanekena fifampivarotana tany hatreto
40 andro izay no nisokatra ho an'ny rehetra voakasiky ny tetikasa Tanà-Masoandro ny birao manokana handraisana an-tanàna ireo tompon-tany sy tompon-trano, natao :
Rafi-panjakana sy rafi-pitantanana Lasa miteraka fikorontanana indray
Efa maharesy lahatra ny maro fa tsy nivaona tamin’ny rafi-pitantanana frantsay hatrany amin’ny fotoanan’ny
Afera 6 miliara ariary Lasibatry ny sonia halatra aho, hoy i Maharante
Nambaran’i Maharante Jean De Dieu, minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra tamin’ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina fa lasibatry ny « sonia halatra »
Pastera Mailhol “Ndao isika rehetra hiara-hitaky ireo Nosy Malagasy”
Ny famerenana ireo Nosy Malagasy ho eo am-pelatànan’ny Madagasikara ihany no hitan’ny pastera Mailhol fa vahaolana hahafahana miady amin’ny fahantrana eto amintsika.
Fanitarana ny fonja Efa mandeha ny asa ao Imerintsiatosika, Fianarantsoa ary Sambava
42 no isan’ireo fonja eto Madagasikara ary efa tany amin’ny taona 1960 ireo no niforona.
Hand-ball Séniors Ny Thbc vehivavy sy Assm lehilahy no tompondaka 2019
Tontosa omaly alahady 15 desambra 2019 tetsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena sy kolontsaina Mahamasina ireo lalao famaranana lalao hand-ball fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara sokajy Séniors.
Rugby Gold Top 20 2019 Fantatra avokoa ireo hiatrika ny ampahefa-dalana
Fantatra avokoa ankehitriny ireo fileovana 4 hanampy ny Cnaps sy Uscar ary ny 3Fai ary ny Tfa vokatry ny lalao ampahavalon-dalana
Edito Maika tsy faingana
“Maika ho aiza isika ?”, hoy ny filohan’ny holafitry ny mpanao gazety nisy ilay raharaha angidimby nampanantsoina mpanao gazety andro alahady indray maka iry.
Taranja matematika Mihena ny fitiavan’ny mpianatra azy
Misy ny fifaninanana mitondra ny lohateny hoe “Rallyes Mathématiques” karakarain’ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena sy ny vondron’ny mpampianatra matematika (GEMMA) miaraka amin’ny masoivohon’ny Frantsa.
Fitrandrahana harena an-kibon’ny tany Tena nisy fahazoan-dalana nivoaka ny taona 2017 sy 2018
Maro ny fahazoan-dalana homena hatramin’ny Jona 2020 araka ny fanambarana nataon’ ny minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika,
Vokatra Malagasy Tombony be no azon’ny firenena vahiny
Misy tokony hahodina eto Madagasikara ihany ireo vokatra mampiavaka ny firenena.
Miralenta Misy herisetra tsy fantatry ny maro, sazian'ilay lalàna vaovao
Lany teny anivon’ny antenimieram-pirenena tamin’ny 13 desambra lasa teo ilay volavolan-dalàna malagasy voalohany momba ny herisetra mifototra amin’ny miralenta na dia somary nisy ihany aza ny savorovoro manodidina an’izany.
COP 25 Hisitraka 150 tapitrisa dolara i Madagasikara
« 40 000 Ha ny velaran-tany novolena zana-kazo manerana ny nosy araka ny fanamby napetraky ny fitondram-panjakana tamin’ity taona ity kanefa tratra tao anatin’ny enim-bolana izany »,
Ramena Antsiranana Voay 3 nanetsehana ny komandon’ny 2ème RFI
Nahitana voay telo lehibe nihaodihaody tany amin’ny sisin-dranomasin’i Ramena any Antsiranana ny faran’ny herinandro teo.
Ambatolampy Tokantranona zandary 7 tratra nangalatra herinaratra
Trano miisa fito, fonenan'ny zandary any Ambatolampy no tra-tehaka nangalatra herinaratry ny JIRAMA, ny 05 desambra lasa teo.
Olana ara-drano Manomboka sosotra ireo mpianatra eny Ankatso
Manome fe-potoana hatramin’ny faran’ny taona ny minisiteran’ny fampianarana ambaratonga ambony mpiahy azy sy ny CROUA ireo
Lalao “Jumbo millionaire” Loka 10 000 000Ar no hozaraina
Raikitra ny “Jumbo Milllionnaire” lalao fanao isan-taona ho an’ny mpankafy sy mpanjifa ny Jumbo ho fisaorana azy. Hisy “millionaire” isaky ny faritany enina, sy loka hozaraina.
Rano maloto sy delestazy Tsy misy iraharahian’ny fanjakana izany
Mitohy ny fahatapahan-jiro lavareny sy ny fahoriana amin’ny fisitrahana rano fisotro madio.
Tetibolam-panjakana 2020 Tsy maintsy hamoahana didy hitsivolana ny fampiharana azy
Ny takarivan`ny zoma teo no naverin`ny solombavambahoaka hodinihin`ny loholona ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 2020. Ireo loholona kosa dia nandinika sy nandany izay fanitsiana napetrak`izy ireo,
Trafikam-behivavy Nifanenjehana teny Ambohipo ilay mpanondran’olona
Raha iny andeha hoentina tamin’ny biraon’ny polisy hanaovana fanadihadiana ireo telo voasambotra,
Vaky trano sy fanafihana Jiolahy 3 matin’ny fokonolona
Efa eo am-pizoran’ny fanamborana ny tohin’ny raharaha tao Andranomifotitra ,
« Kidnapping » tany Anjorobe 4 no maty, tsy mbola hita ilay nalaina an-keriny
Nisy tranga fakana an-keriny ny herinandro lasa teo tany Anjorobe, distrika Lalangiana ka olona miisa efatra no maty nandritra ny fanafihana.
Antsampandrano Antsirabe II Nananganan’ny fokonolona birao ny zandary
Zon’ny olom-pirenena ny hiaina anaty filaminana, andraikitry ny fitondrana no manome fitaovana sy fotodrafitrasa ireo mpitandro filaminana.
Tetezan’i Mitsinjo - RN4 Fiarabe nivadika, 1 maty, 1 naratra
Nitrangana lozam-piarakodia nahafatesana olona indray ny lalam-pirenena fahefatra (RN4), ny sabotsy vao mangiran-dratsy teo, tokony ho tamin’ny 5 ora.